Buddhism na ndụ kwa ụbọchị - ọdịdị nke Bud (Zen) Buddhism.
BUDDHISM N’ LIFEB LIFERVER NSỌ
Ọ bụ ihe omuma, ọ bụ ọkaibe!
Ihe karịrị afọ iri atọ gara aga, agara m n'ụlọ nsọ Shaolin a ma ama na China, soro ndị mọnk biri ogologo oge, nwee ndị enyi, mụta Kung Fu ma sonye na nkuzi Buddha. Mgbe onye Abbot nyere m ọrụ ka m chọta Shaolin Temple Germany, mmụọ nke nnukwu onye nkuzi bịarutere ma nso.
Edere akwụkwọ a "Shaolin Rainer" site na ntachi obi nke ode akwụkwọ Karl Kronmüller. Ọ nọ na-arịọ ma ọ bụrụ na achọghị m inye ya 'ihe', ọ hụrụ akụkọ ndụ m na-atọ m ụtọ. Anọgidere m 'mba', ọ nọ na-arịọ, mgbe ụfọdụ m nyere ya. Taa akwụkwọ dị ma enwere m mpako na ya.
Blọọgụ a, okwu nkuzi na ọgụgụ gụpụtara n’akwụkwọ ahụ.
Ọzụzụ m, echiche m
N'uche m, Buddhism abughi okpukpe, o bu ihe omuma na echiche nke uwa. Buda enwebeghị mmetụta dịka Chukwu, na onweghị onye na ụwa m. Ma enwere ike dị na mbara igwe, ndị a nwekwara ike ịdakwuru anyị nnukwu ndị nkuzi, zie ha ozi ọma. Worldwa ahụwokwa ọtụtụ, ma Jizọs, Mohammed ma ọ bụ Buddha, Gandhi ma ọ bụ Bodhidharma. Ndị a nwere njikọ na mbara igwe, nke na-echekwa mgbe ahụ ejikọtara ya na àgwà Chineke. Ndị nkuzi niile niile nwere nkwenkwe dị iche iche, yana ụzọ dị iche iche, mana ha siri yie.
Okwu a bu “O gha emeghi”. Na Buddha, ụkpụrụ ndị a bụkwa isi nke nkuzi. Nnukwu ndị nkuzi tinye ahịrịokwu ndị a na mbido. Ọ bụ mgbe emechara ka “ndị amụma ụgha” na-agba mmiri ka ha ,ụọ mmiri, mgbe ụfọdụkwa ha na-atụgharị.
Buddhist na ndụ kwa ụbọchị
Buddhist na ndụ kwa ụbọchị pụtara itinye uche na ndụ kwa ụbọchị.
Mu onwem, Rainer Deyhle bu onye mbu Shaolin nke German amara na onye guzobere ụlọ temple na Germany.
M na-akọwa ọdịdị nke Buddhism Chan (Zen) n'ụzọ dị mfe ma ghọta ya; differentzọ dị iche iche kwa ụbọchị si bụrụ ezi ihe nlereanya ma dịkwa mfe nghọta.
Onye ọ bụla nwere ike ịnweta "uru" nke Chan Buddhism na ndụ ha kwa ụbọchị wee chọta idoanya, zest maka ndụ na udo nke ime.
Akwụkwọ ọhụrụ m dị ugbu a na ụlọ ahịa!
Ndị enyi m
Ọ ga-amasị m ikele ndị enyi m na ndị maara m ndị sonyere ndụ m ma soro ruo taa. Ndị a bụ: Ndị mụrụ m na nwa m nwanyị, nna m ukwu Shi Yan Zi, onye abbot Shi Yong Xin, Taema, Ta, Tian Tian & FHY, Georg, Rolf Liem, Carsten Ernst, Shi Heng Zong, Melena, Carsten Römer, Jan R., Bin, Heinz, Yannis, Lufti, Michail, Peter, Sven, Ümi, Tien Sy, Stefan Hammer, Andre Mewis, Billy, Traudi, Rainer Hackl, Hurz, Romano, Martin, Ashley, Dr. Ihe. Ekele pụrụ iche bụ enyi m Karl Kronmüller. Ọ na-echetara m mgbe niile na oge a chọkwara akụkọ dị mma.
Chief Master nke Shaolin temple Kaiserslautern
Nna m ukwu Shi Yan Zi
Ndị mọnkị ígwè
Nzute ya na Yan Zi gbanwere ndụ m nke ukwuu. Mgbe m gwara ya okwu n’ebe obibi ndị mọnk ahụ n’oge ahụ, amataghị m nnukwu mgbanwe ga-adịrị m n’oge a. Taa Shi Yan Zi na-edu Shalọ Shaolin dị na England n'aha Abbot Shi Yong Xin a na-asọpụrụ. Shifu (Master) Shi Yan Zi, bụ otu n'ime ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke Abbot na onye ndu GongFu na-eduga n'etiti ndị mọnk Shaolin nke 34. Shi Yan Zi gụrụ akwụkwọ na Martial Arts College nke Shaolin na 1983 wee bụrụ nwa akwụkwọ nke Abbot Shi Yong Xin na 1987.
Gaa n'ụlọ nsọ UK
Izere ihe ojoo nile, imeputa ihe oma nile, sacha uche ya. Nke a bụ uwe ejiji Buddha mgbe niile.
Yabụ Buddhism na-akuziri anyị ọrụ, ọ na-egosi anyị na anyị na-aza kpam kpam maka ihe anyị na-eme na nke anyị anaghị eme, na anyị enweghị ike ịta onye ọzọ ụta maka ya; na anyị kwesiri imesi ihe ike site na ike na mbọ anyị. Buddha na-egosi anyị ụzọ, mana anyị ga-aga ya n'onwe anyị.
ASTLỌ EGO NA-EGWU NA BLOG
Inwe ike na Buddha
Karma bụ onye
Master Master Yan Yan Yi:
OLEE Onye M bu?
Enweghị m ike ikpe ma akụkọ m ịmasị gị.
M bikwa ndụ wee dịrị, nakweere ịma aka, enweghị nkụda mmụọ, mana m na-agbasi ụkwụ m ike mgbe niile. Ighaghachite adighi ike. Achọghị m izochi eziokwu ahụ na ụfọdụ mpako na-ejide m. Ikekwe ị nwekwara ike inwe mmetụta dị mma ebe a ma were ha na echiche gị.
Copyright © 2019 Shaolin Rainer - Egosiputara ya na ndi ukwu. akara | Nzuzo | Kpọtụrụ
Weebụsaịtị a na-eji kuki iji melite ahụmịhe gị. Anyị na-eche na ị kwenyere, mana ị nwere ike wepu aha ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ntọala kukiACCEPT